BAAQA DHALINYARTA IYO FAHANKA DAWLAD NIMADA.
Wednesday May 20, 2020 - 02:48:49 in Wararka by Super Admin
Dhalinyarada baaqa diraysana ha kasoo dhex muuqdaan Axsaabta siyaasiga ah oo wixii toosina halkaa ha kusoo ban dhigaan.
1. Qofkasta oo warqadaa saxeexay ama cabanayaa waxa uu soo doortay xildhibaan fadhiya golaha Wakiilada JSL oo u matalaya shacabkooda, maxaa sababay in dhibta dhalinyartu sheegtay in ay ka hadlaan?
2. Axsaabtu waa halka loogu talo galay toosinta iyo dabagalka xukuumada waxii ka qaldama maadaama oo ay beri doonayaan in ay dalka xukumaan. Hadaba aaway xisbiyadii waxa qaloocan toosin lahaa?
1. Hogaamiye han iyo himilo xambaarsan ( leadership with strong vision ) hogaamintu waxay u qaybsantaa guud ahaan laba qaybood oo waawayn
• Hogaamiye la dareena dadkisa ( democratic leadership ) waxaa aas-aas u ah wada tashi iyo in uu xaalad kasta la dareen noqdo dadkisa
• Hogaamiye kali taliye ah ( Autocratic leadership ) hogaamintani waa car juuqdhe, caga juglayn iyo cadaadis joogta ah.
2. Wax wada lahaansho u dhexeeya umada ( Resource sharing ) dawladnimadu maaha wax qof, qolo ama shaqsiyaad ay dheefteeda iyo dhibteeda labadaba helaan laakiin waa tusaale ahaan saxan raashin ku jiro oo dhamaan dadku wada wadaagayaan.
3. Isla xisaabtan dawladeed ( accountability ) qofka aad u dhiibto tukaan aad leeday waxaad ka xisaabisaa macaashka iyo qasaaraha sidaa si la mida waxaa muhiima in dawlada ay si joogta ah ula xisaabtamaan golaha shacabku maadaama oo ay matalaan dadka, muwadinkuna waxa uu xaq uleeyahay in uu ogaado halka cashuurtiisi martay
1. Waa qayb u haysata lahaanshaha dawlada dheefteeda iyo dhibteeduba in ay ayaga ku dhacayso taasina waxay meesha ka saartay wax wada lahaanshihii.
2. Waxa kaloo jira qayb ay iskaga qasantay mucaaridnimada iyo qaranimada JSL hadii aad waydo xaqaaga iyo xuquud aad leeday macnaheedu maaha in Somaliland la waayo; Odhaahda qoladani waa dal la qaybsaday oo aan muwaadinka labaad ka ahay ayaan ku nooolay.
1. Somaliland uma baahna manta in layswaydiiyo qaranimadeeda ee waxay u baahantay in la xaliyo saluuga iyo saamiqaybsiga jira.
2. Somaliland waxay u baahantay hogaan han iyo himilo xanbaarsan ee uma baahna shaqsi loogu cumaamado ama lagu taageero sifo qabiil.
3. Golayaasha qaranku ha qaatan doorkoodii la xisaabtanka dawlada